OnePlus 5: ယခုအထိကျွန်ုပ်တို့သိသမျှ Androidsis
OnePlus 5: ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံး
OnePlus 3T သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သောစွမ်းအားအရှိဆုံးနှင့်တတ်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Galaxy S2016, HTC7သို့မဟုတ် LG G10 ကဲ့သို့သောအထင်ကရစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အခြားစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစမတ်ဖုန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်တွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီ OnePlus5ဟုခေါ်သောစမတ်ဖုန်းနှင့်အတူတူပင်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်ဖို့ပရီမီယံ features တွေ က galaxy S8, LG G6 နှင့်အခြားအဆင့်မြင့်ဖုန်းများမှာမူကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာသည်။
OnePlus5ကိုလအနည်းငယ်အကြာလွှတ်တင်လိုက်သောကြောင့်ဤ post တွင်လာမည့် OnePlus5၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဒီဇိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုယခုအချိန်တွင်သိရှိနိုင်သည်ကိုလေ့လာကြပါမည်။
2 OnePlus5လွှတ်ပေးရက်
3 OnePlus5စျေးနှုန်း
OnePlus5သည်“ အထင်ကရလူသတ်သမား” ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် high-end သတ်မှတ်ချက်များကိုပေးမည်ဖြစ်ပြီးစျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ OnePlus5သည်၎င်း၏ယခင်ကဲ့သို့ပင်၊ ၁.၄ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင် Full HD resolution ဖြင့်သို့မဟုတ် quad HD ကိုနှင့် Galaxy S8 ၏ပုံစံတွင်ကွေးနေသောအနားများကိုပင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဟာ့ဒ်ဝဲ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, OnePlus5ပရိုဆက်ဆာကိုဆောင်ခဲ့ ဦး မည် Snapdragon 835 (ထို့အပြင် Galaxy S8 နှင့် the အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည် Xiaomi က Mi 6), လည်းပဲ6GB RAM နှင့် 128 GB ကို သိုလှောင်မှုအတွက်အာကာသ၏။ သို့သော်ပိုမိုစွမ်းအားပြည့်သည့်ဗားရှင်းလည်းရှိနိုင်သည် 8 GB RAM နှင့် 256 GB ကို ၎င်း၏လွှတ်ပေးရန်နောက်ပိုင်းရက်စွဲတွင်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ပေမယ့်, သိုလှောင်ဘို့။
ကင်မရာနှစ်လုံးဖြင့် OnePlus5အယူအဆ
အခြားတစ်ဖက်တွင်, OnePlus5ကဆောင်ခဲ့ ဦး မည်ဟုလည်းလူသိများသည် လက်ဗွေစကင်နာ OnePlus 3.600T ၏ ၃,၄၀၀mAh ဘက္ထရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရှေ့ဘက်နှင့် ၃၆၀၀mAh ဘက်ထရီတို့ပါဝင်သည်။ Dash အားသွင်း, သူကပိုကောင်းတဲ့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်နှင့် device ကို၎င်း၏ယခင်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 25% ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအားသွင်းရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဓာတ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ OnePlus5သည်ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် အနောက်ဘက်ကင်မရာHuawei P10 နှင့် LG G6 တို့ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ကင်မရာများသည်အလျားလိုက်မဟုတ်ဘဲဒေါင်လိုက်အနေအထားဖြင့်မဟုတ်ဘဲယခင်ကကောလဟာလများထွက်ခဲ့သည့်အတိုင်းမဟုတ်ပါ။
OnePlus5နှင့်သက်ဆိုင်သောအဓိကပြissueနာမှာနားကြပ်အပေါက်၏တည်ရှိမှု (သို့မဟုတ်မ) ဖြစ်သည်။ အများဆုံးဖွယ်ရှိ, ကုမ္ပဏီကဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ် ၃.၅ မီလီမီတာအပေါက်၎င်းကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Carl Pei က ၂၀၁၆ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဤပြveryနာနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တက်ရောက်သူအများစု (၈၈%) ကနားကြပ်ပေါက်သည်စမတ်ဖုန်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
- Carl Pei (@getpeid) အောက်တိုဘာလ 25, 2016
Software ကိုပညာရှိ, အ OnePlus5ကို run ပါလိမ့်မယ် OxygenOS စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android Nougat။ မကြာသေးမီကအဆက်အသွယ်များ၊ နောက်ဆုံးအသုံးပြုထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုလျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သော“ Shelf” ကဲ့သို့သောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာအချို့ထည့်သွင်းနေစဉ်၎င်းသည် Android ၏အသွင်အပြင်ကိုသိပ်မပြောင်းလဲပါ။
OnePlus5စတင်ချိန်သည်ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုမ္ပဏီသည်နှစ်စဉ်ပုံစံအတိုင်းလိုက်လျှောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ OnePlus 1 ကို ၂၀၁၆ Aprilပြီလ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် OnePlus 2016 နှင့် ၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် OnePlus2ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် OnePlus 2015T သည်ထိုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သည်။
၎င်းကိရိယာကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ဖြန့်ချိမည်ကိုအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သေချာသိပါသည် ဒီနွေရာသီစျေးကွက်ဝင်တိုက်, OnePlus မကြာသေးမီကပေါ်တယ်မှအတည်ပြုအဖြစ် the Verge။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်ငါတို့သူ့ကိုတရားဝင်တွေ့လိမ့်မယ် ဇွန်လနှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်ဇူလိုင်လအစောပိုင်း.
OnePlus5စျေးနှုန်း
OnePlus ထုတ်ကုန်များသည်သုံးစွဲသူများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသောအဓိကအကြောင်းအရင်းတစ်ခုမှာတိတိကျကျပြောရလျှင်၎င်းတို့သည်စျေးသက်သာပြီးမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကုမ္ပဏီသည်မော်ဒယ်သစ်တစ်ခုစီနှင့်စျေးနှုန်းအနည်းငယ်တက်လာသည်။ OnePlus 1 သည်စတင်ဈေးနှုန်းမှာ ၂၉၉ ယူရိုဖြစ်ပြီး ၃၂၉ ယူရိုဖြင့်စတင်ရောင်းချသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် OnePlus 299 သည်စျေးကွက်ကိုဒေါ်လာ ၃၉၉ ဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပြီးအချို့သောစတိုးဆိုင်များတွင် 329T သည်ယူရို ၄၂၅ ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ OnePlus5သည်ယခင်ယခင်ကထက်အနည်းငယ်စျေးကြီးသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာ OnePlus 3T ထက်မကစျေးကြီးသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မော်ဒယ်အသစ် ယူရို ၅၀၀ ထိ ၎င်းသည်အချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်စေသည်ဖြစ်စေပေါ်မူတည်သည် ကင်မရာနှစ်ခုသို့မဟုတ်ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်.
ဤရွေ့ကားယနေ့အထိ OnePlus5နှင့်ပတ်သက်။ ထွက်ရှိထွက်ကောလာဟလများအားလုံးဖြစ်ကြသည်, သို့သော်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းယိုစိမ့်ဖြစ်ဖို့သေချာရှိပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » OnePlus 5: ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သိသမျှအားလုံး
ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Galaxy Note7သည် Exynos 8890 နှင့် 8895 processor တို့နှင့်အတူအခြေခံစံနှုန်းများတွင်ရှိသည်
Opera Max 3.0 သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါဒေတာစုဆောင်းမှု ၅၀% ကိုကတိပေးသည်